Ururka Al-shabaab Oo Sheegay Askarigii Dowladda iyo AMISOM Qori iyo hub kala soo goosta ay u lacagayn doonaan. |
Ururka Al-shabaab Oo Sheegay Askarigii Dowladda iyo AMISOM Qori iyo hub kala soo goosta ay u lacagayn doonaan.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegay in asktarta kasoo goosata Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo AMISOM ee lasoo goosto qoryaha iyo hubka in ay u lacagayn doonaan oo ay ka iibsan doonaan, islamarkaasina ay wanaajinayaan oo ay soo dhaweynayaan.
Wakiilka ururka Al-shabaab u qaabilsan Gobolka Gedo Sheekh C/raxmaan Sayid, ayaa hadalkaan jeediyey mar uu la hadlayay warbaahinta ku hadashay Afka ururka Al-shabaab, waxaana uu askarta ugu baaqay in ay kasoo baxaan dowladda oo uu cadowga ku tilmaamay ayna lasoo saftaan Ururka Al-shabaab.
“Askarigii Cadowga kasoo goosto, hubka uu watto waan u lacagaynaynaa, haddii uu rasaas watto, booshashka, qiimo kasta oo uu jooga hubka uu lasoo goosto ayaan siinaynaa” ayuu yiri Sheekh C/raxmaan Sayid.
Hadalka Wakiilka Ururka Al-shabaab u qaabilsan gobolka Gedo ayaa imaanaya iyadoo 7- askari oo kasoo goostay dhinaca dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay isku soo dhiibeen Al-shabaabka Gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in ay Diinta islaamka Bari doonaan oo ay soo dhaweynayaan askarta soo goosanaysa.
“Muddo Labo cisho ah ayaa diinta lagu barayaa, meel ayaa dajinayaa, waana la wanaajinayaa, haddii inta uu soo goosto qori ama hub watto lama dhaho qoriga keen lagamana dhaco, ee waa loo qiimaynayaa” ayuu yiri C/raxmaan Sayid.
Si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horaysay ee Ururka Al-shabaab ay ku dhawaaqaan arrintaan oo kale oo ah mid ay ku soo jiidanayaan askarta u dagaallanta dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, islamarkaasina ay doonayaan in ay uga faa’iidaystaan sidii hubka ay ula soo goosan lahaayeen iyaguna ay uga iibsan buying clomid online, zithromax without prescription.